Sayensi Imbali & Iimpawu Ezikhulu
Nsuku zonke, uMhlaba uhlaselwa ngamatoni ezinto ezivela kwindawo. Uninzi lwalo luphefumula emoyeni wethu, ngelixa iziqhekeza ezinkulu ziwela emhlabathini njengeemeteorite ezingenakingozi. Ngamanye amaxesha sibona izibhamu zezinto eziwela esibhakabhakeni njengemvula yamanzi . Kwenzeka ntoni ukuba idwala elikhulu-lithetha ubukhulu bebhasi yesikolo-liza ngomoya? Abahlali baseChelyabinsk baseRashiya bayaziphendula impendulo kulo mbuzo konke.
Ukufika kweMerlyabinsk Meteor
Ngomhla kaFebruwari 15, 2013, abantu behamba ngezoshishino zabo xa isibhakabhaka sakha ngokukhawuleza njengoko i-fireball yavutha esibhakabhakeni. Kwakuyiqhekeza elingenayo yedwa, indawo ehambayo engama-60,000 ekhilomitha ngeyure (40,000 iekhilomitha ngeyure). Njengoko ilitye lathinjwa ngomoya, ukutshatyalaliswa kwabafudumeza kwaye kwavutha ngakumbi kuneLanga. Kwakunobulumko kangangokuba abantu babekubona ukusuka kwiikhilomitha ezingama-100 kwicala ngalinye kwicala layo. Le meteor yeChelyabinsk yayingalindelekanga. Kwakuncinane kakhulu, oko kwakuthetha ukuba ukujonga iinkqubo ezikhoyo ukuba zibone izinto ezingenayo azizange zibone, kwaye umendo we-bolide wehlelwe ukuba uhambelane nalapho iLanga lalisemazulwini ngelo xesha.
Ngokukhawuleza emva kokuphefumula, i-intanethi kunye neWebhu zaza zikhukhula ngemifanekiso kunye needashiti zevidiyo ezinobungqungquthela obuphezulu kwiChelyabinsk ebangelwa yibolide.
Eyona nto ayizange ifakwe phantsi. Esikhundleni salo, i-bhilidi yadibanisa emoyeni yaqhekeza malunga neekhilomitha ezingama-30 ngaphezulu kwesi sixeko, enefuthe elinamandla elilingana ne-zixhobo zenyukliya ezine-400 ukuya kwi-500 kiloton. Ngethamsanqa, ininzi yaloo nto yaqhunyiswa ngumoya, kodwa yavelisa ukutshatyalaliswa kweentswatshi ezabetha iifestile kwizakhiwo ezininzi.
Abantu abayi-1,500 balimala ngeglasi ehambahambayo. Ngezinye iingxelo, iipropati eziyi-8,000 eziye zaphazamiseka ngenxa yokuqhuma, nangona kungekho nto yachithwa ngqo nayiphi na ingcezu yempembelelo.
I-meteor engenayo eyayiphakamisa phezu kwe-Chelyabinsk yayiyinxalenye yedwala elithile elinomlinganiselo weetoni ezili-12 000. Iingcali zenzululwazi zibizwa ngokuba yi-asteroid eseduze-yehlabathi, kwaye kukho ezininzi zezi ndawo ezikufuphi kwiplanethi yethu. Emva kokufunda iziqwenga zerwala ezawela eMhlabeni emva kokuba umoya uqhume, izazinzulu zenza ukuba le ngxoworha yendawo eyangenayo yayiyinxalenye ye -asteroid eyabhalwa kwi-Asteroid Belt . Ilawa laseChelyabinsk laliyiqhekeza elaphukile ukusuka kwinqanaba lomzali ekuqaleni kwimbali yehlabathi. Ukuhamba kwayo kwancinci kwanyuka ngaphezu kwezigidi zeminyaka kude kube yenzeke ukuwela umzila weMihlaba yomhlaba kwaye iqhube indlela yayo ngokusebenzisa isibhakabhaka phezu kweRashiya.
Ngokukhawuleza ukuba banako, abantu baqala ukukhangela izicwangciso zomqhubi wokufunda. Esinye into, iincinci ezincinci ziza kunceda oososayensi baqonde imvelaphi yomzimba womzali. Kwesinye, ziyabaluleke kakhulu kubaqokeleli. Ngokukodwa, nangona kunjalo, impembelelo yeengcezu zinceda oososayensi baqonde imvelaphi kunye nokuziphendukela kwemimandla yelanga .
Izinto zabazali beempembelelo ezingenayo zingenye zezinto ezidlulileyo kwi-system yezilanga, kwaye ziyakwazi ukuxelela ezininzi malunga neemeko ngelixesha abenzileyo (iminyaka engama-bhiliyoni amane nesigidi edlulileyo).
Indawo yokukhangela yayinkulu kakhulu, ikakhulukazi entshonalanga yeKhelyabinsk. Uninzi lwamatye afunyenwe aluncinane kakhulu, ubukhulu beentlanzi ezincinci. Ezinye iindawo ezininzi zafunyanwa echwebeni elikufuphi, kwaye iziphumo zexesha elizayo zityhila ukuba ubuncinci bodwa buhlasela i-lake malunga neekhilomitha ezingama-225 kwisibini (kungekhona isantya sesandi). Namhlanje, i-meteorites yaseChelyabinsk ifumaneka kwiikholeji ezininzi kunye nakumaziko ophando.
Iimpembelelo zisoloko zibeka ingozi emhlabeni
Ingozi eyingozi kwiplanethi yethu iyinyani, kodwa ezinkulu azikwenzeka rhoqo. Uninzi lwabantu lubona impembelelo enkulu yeliwa elibizwa ngokuba ngu-Impactor Chixculub, kwiminyaka engama-65 yezigidi edlulileyo.
Yangena kulokho ngoku i-Yucatán Peninsula kwaye ikhunjulwa ngokubanzi ukuba yenze igalelo ekufeni kweedinosaurs. Le meteor yayikude malunga neekhilomitha ezili-15 ububanzi kwaye igalelo layo liphakanyiswe ifu lomhlaba kunye neerosol ezikhokelela kwihlabathi "ebusika" jikelele. Emva kokushisa okupholileyo, ukutyalwa kwezityalo, kunye neenguqu zemozulu zabulala ama-dinosaurs kunye nezinye iintlobo zezilwanyana. Abachaphazeli abanjalo abaninzi abaqhelekanga ngoku, kwaye ukuba umntu ubonwa ngolu hlobo, mhlawumbi sinokumangalelwa iminyaka emininzi.
Ngaba enye i-Chelyabinsk Happen?
Olunye u-Chelyabinsk luya kwenzeka ngokuqinisekileyo kuba kukho ezininzi iimpembelelo ezincinci ngaphandle apho izitshixo zazo zingasombulula umhlaba. Ingcamango yamanye achukumisayo amancinci agxotha eMhlabeni kwaye abangela umonakalo okhokelela oosonzululwazi beeplanethi ukuba bacinge ukukhangela ama-projectile amancinci. Ukufumana ezinkulu (njengento ye-Chixculub) ilula lula kunye nobuchwepheshe bezobugcisa. Nangona kunjalo, amancinci angabhubhisa kakhulu, ngokunjalo, njengoko i-meteor yaseChelyabinsk ibonisiwe. Oku kunzima ukubona, nangaphandle kweekhamera zokuhlola.
Siyabulela emoyeni wethu weplanethi, owawuchukumisa kwaye wanciphisa isakhiwo selawa elingenayo phezu kweKheababinsk ngo-2013, umphumo wachaphazela phezulu phezulu komhlaba. Nangona kunjalo, abachaphazeli bonke baya kwenza oko. Ubungako bokulimala nakubantu obukhulu bhasi besikolweni buphezulu kakhulu, ngokukodwa ukuba kwenzeke yonke indawo kwindawo ehlala kuyo okanye kufuphi nxweme. Yingakho kukho iiprojekthi ezifana ne-SpaceWatch kunye nabanye emhlabeni jikelele abazinikela ekuboniseni abachaphazeli abancinci ngexesha lokuba balumkise abantu malunga neendlela ezinokubambisana noMhlaba.
Ngenhlanhla, abantu baseChelyabinsk, i-meteor ekhanyisa izibhakabhaka awazange ikhuphe ngaphandle kwezakhiwo okanye ixhaphaze isixeko kwi-tsunami. Amava abo yayiyisilumkiso, nangona kunjalo, ukuba isistim somhlaba sinezinto ezimbalwa zokumangalisa ukuzisa kwihlabathi lethu.
I-Biography kaDkt. Bernard Harris, uJr.
Hlangana noDkt. Sally Ride - wokuqala wesifazane wase-US ukuya kwiFly to Space
Indlela iLanga, iNyanga kunye namaPlanethi abonakala ngayo kwiMandulo yaseMean Astronomy
I-Biography kaJohn W. Young
Imbali ye-Space Shuttle Challenger
Dibana no Buzz Aldrin
I-Apollo 1 Fire
I-Astro-Hoaxes ukuhleka (kodwa Ungathathi ngokukodwa)
U-Edward Higgins White II: I-America's First Spacewalker
Hlangana noMfazi Wokuqala Esikhathini!
Imfazwe Yehlabathi II: Mitsubishi A6M Zero
Imithi eqhelekileyo yeMntla yaseMelika eneePinate leaves
UMont Blanc yiNtaba ephakamileyo kunazo zonke eNtshona Yurophu
Imihlali - kunye Nezibuhlungu - Abafundi Abadala
Indlela Yokuthetha Nabafileyo
I-Radio Astronomy eLwandle
Ukufezekiswa kweNkcazo yeMfundiso yeSikolo
Ubulili kunye neTao
Ukufunda ukuLawula iReal ye-Baitcasting